अब साङ्लासँग डराउँने होइन, खेदीखेदी समाएर दुध निकाल्नु पर्ने भो - ज्ञानविज्ञान
आजसम्म तपाईंले गाई, भैँसी, बाख्रा लगायतका जनावरको दूध पिउनु भएको होला । प्रोटिन लगायतका विभिन्न पोषक तत्व हुने दूधलाई निकै गुणकारी खानेकुरा मानिन्छ ।
स्तनधारीको दूध हुनु स्वभाविकै हो । तर के तपाइँले कुनै किट पतङ्गको दूधको बारेमा सुन्नुभएको छ ? अझ किराको दूध गाईको दूध भन्दा पनि धेरै फाइदाजनक हुन्छ भन्ने सुन्दा सायद पत्याउनु हुन्न होला ।
हो, यो दुनियामा एउटा यस्तो प्रजातिको साङ्ला छ, जसले दूध दिन्छ । उक्त साङ्लाले अण्डा पार्दैन, बच्चा जन्माउँदछ । उक्त साङ्लाको दूधमा अन्य जनावरको दूधको तुलनामा निकै धेरै पौष्टिक तत्व हुन्छ ।
विश्वका विभिन्न दशेका मानिसहरुले साङ्लाको दूध सेवन गरिरहेका छन् । आउँदा दिनमा त्यहीँ साङ्लाको दूधले विश्वव्यापी बजार पिट्नेवाला छ ।
भारतका वैज्ञानिक सुब्रमण्यम रामाश्वमईले यस विषयमा अनुसन्धान गरेका छन् । उनका अनुसार दूध दिने साङ्ला प्रजातिको नाम डिप्लोप्टेरा पंक्टाटा अर्थात् प्यासिफिक बिटल कक्रोच हो ।
यो साङ्लाका बच्चा धेरै समयसम्म बाँच्दछन्, निकै स्वस्थ हुन्छन् । त्यसको मुख्य कारण चाहीँ साङ्लाको दूध नै हो ।
अध्ययनको क्रममा गाईको दूधमा भन्दा उक्त साङ्लाको दूधमा चार गुणा बढी पौष्टिक तत्व पाइन्छ । साङ्लाको दूधमा प्रोटिन क्रिस्टल नामको एक धातु पाइन्छ । जसले उक्त दूधलाई निकै पौष्टिक तथा शक्तिशाली बनाउँदछ ।
यस्ता छन् साङ्लाको कारण लग्न सक्ने रोग
साङ्ला देख्दा हामीलाई घिन लाग्छ कतिलाई त डर पनि लाग्छ । गर्मी बिस्तारै बढ्दैछ । गर्मी बढेसँगै लामखुट्टे, झिँगा र साङ्ला (कक्रोज)ले दुख दिन्छ । साङ्ला न मारेर सकिन्छ, न धपाएर । यसले घरको विद्युतिय यन्त्रलाई, फोहोर फैलाउँछ साथै खानेकुरालाई दुषित बनाइदिन्छ ।
साबुन या स्याम्पुको झोलले सबैभन्दा छिटो र सजिलो किसिमले साङ्ला मर्दछन् । साङ्लाको शरीरमा साबुनको झोल परेपछि यसले बाहिरबाट हावा लिन पाउँदैन । साङ्लाले श्वास फेर्न छालाको सहारा लिने हुँदा शरीरमा साबुनको झोलले स्वास फेर्न अथवा लिन अप्ठ्यारो हुने कारणले गर्दा साङ्ला सास लिन नसकी छटपटिएर मर्छ ।
साङ्ला रहनको लागी ओसिलो ठाउँ अतिनै अनुकूल मानिन्छ । त्यसैले पनि आफ्नो भान्सा कोठालाई ओसमुक्त राख्नुभयो भने पनि साङ्लाबाट केही हदसम्म भएपनि राहत हुन्छ ।
Topics #दुध #साङ्ला #साङ्लाकाे दुध
Don't Miss it तीते करेला तितो तरकारी मात्र होइन यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा मिठो फाइदा पनि दिन्छ जान्नुहोस्
Up Next हाई ब्लड प्रेशरका बारेमा जान्नै पर्ने यी कुरा तपाईलाई थाहा छ ? जानी राखौँ
हाम्रो क्यालेन्डरहरू १२ महिनामा विभाजन गरिएको छ। प्रत्येक महिनाले हामीसँग बिभिन्न सम्बन्ध राख्छन । हामी सबै महिना मनाउँदछौं जस्तै जन्मदिन…
अनुहारमा पिम्पल आएर सुन्दरतालाई कायम राख्न सक्नु आजको आम मानिसको स्वास्थ्य चुनौतिको रुपमा आएको छ । बजारमा पिम्पल हटाउने अनेकौं…